NRVNA isebenzisa i omuhle indaba ephathwayo space kanye nesikhathi-based okuzokwenza lokubungaza kulo lonke. It siqukethe 30 paylines futhi 5 reels. Gameplay ezihlekisayo siyokulethela spin reels ngokuphindaphindiwe kanye nezimpawu ahlotshiswe uzobandakanya nawe kule game.
Wena uzokujabulela le game ukuze ungakhohlwa ukudlala for fun at ikhasino yethu. Ungabhalisela free at Coinfalls Casino by nokufaka imali efika ku- £ 50.00 futhi uthole 200% ehambelana up ibhonasi.
NetEnt aklame lo kumnandi esondweni umdlalo has top ihluzo notch nomculo background obumangalisayo. NetEnt iye ukuklama Slots Classic semidlalo yasekhasino okuyizinto high quality kanti lena ingenye imidlalo yayo best.
NRVNA has a isihloko esihle lapho izokwenza isithakazelo esikhulu kanye osebenzisa lo mdlalo aesthetically amahle. A coin size from 0.01p to £150.00 can be fixed in this game.
NRVNA isebenzisa base izimpawu ezifana 10, J, A, K, futhi Q ukukhokha kuwe multipliers afinyelela ku x125.
Amatshwayo main kule game zihlanganisa amaqabunga ezine clover, iziqondisi, cherry, uthathe ngasikhombisa, nezinsimbi. Lezi mpawu Ungakwazi ukukhokha wena wokuphindaphinda kumnandi afinyelela ku x2, 000. Lo mdlalo isebenzisa uphawu zasendle inkanyezi emhlophe ngaphakathi bubble pink lapho esikhundleni zonke izithombe reels ngaphandle le logo chitha.
I logo chitha is a diamond emhlophe zihambisana bubble orange oyenza isebenze osebenzisa free isici. Uma uwela izimpawu ezintathu ezifanayo izithombe ihlakaza ungawina up to 10 osebenzisa free kanye osakaza ezine uzothola nawe 15 osebenzisa free kanye 5 Usakaza uyosibonisa wena 30 osebenzisa.
Kuyilapho osebenzisa free kuthiwa ukuphotha the NRVNA wheel isici kwabangela lapho uthola wokuphindaphinda of x10 kanye 2 extra osebenzisa khulula. Le game Ubuye imodi Autoplay lapho ungabeka ngokuzenzakalelayo reels spin obuzocupha kwi ezinkudlwana. Ngakho asonge izandla uphumule. It zikhanga RTP fabulous 96.60%.
NRVNA kuyinto fantasy based video slot uthembisa ukunikeza fun and ukuzijabulisa. Uma umthandi Slots futhi ngifuna brilliant slot game ke lokhu ngeke akudumaza. Bhalisa for free at casino yethu ukuze uthole iphakethe ezivelele wamukelekile of 200% on idiphozi wakho wokuqala efika ku- £ 50.00.Hurry ukujoyina yekhasino yethu manje!